Huawei Y9 Prime 2019: ekwentị ọzọ nke ụlọ ọrụ nwere igwefoto selfie na igwefoto atọ na azụ | Gam akporosis
Huawei Y9 Prime 2019: ekwentị na-esote site na ụlọ ọrụ nwere igwefoto selfie na igwefoto azụ atọ
El Huawei P SmartZ Ọ bụ ekwentị mbụ nke Huawei nwere igwefoto selfie, mana ọ gaghị abụ nke ikpeazụ dịka ọhụụ ọhụụ ekpughere ya Huawei Y9 Prime na-esote site na nnukwu onye China ga-enwekwa igwefoto selfie ... na igwefoto azụ atọ, na mgbakwunye.
Iwụpu ahụ gụnyere akwụkwọ mmado ewere na ụlọ ahịa, yana onyonyo aka ekwentị. Ọ na-ekpughekwa nkọwa ya. Ka anyị lee ihe a niile n'okpuru!
Dị ka ihe a chịkọtara si dị, n'ihu Huawei Y9 Prime 2019 na-ekerịta ụdị atụmatụ ahụ na nke P Smart Z. Ngwaọrụ abụọ nwere ike ịgafe otu, ọbụlagodi na ha nwere aha dị iche iche.
Huawei Y9 Prime 2019 gbaba na posta ụlọ ahịa
N'aka nke ọzọ, ngwaọrụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nkọwa dị ka P Smart Z. Foto ndị ahụ gosikwara na o nwere ụdị ụda olu abụọ yiri ya na azụ.
Yabụ inweta ngosi ngosi nke 6,59 nke anụ ọhịa nwere mkpebi FHD + na 91.006% nha ihu na ihu na Kirin 710F dị n'okpuru mkpuchi, yana 4GB RAM na 128GB nchekwa.
Igwefoto selfie igwefoto bụ ihe mmetụta 16 MP (f / 2.2), mgbe kamera azụ nke okpukpu atọ gụnyere ihe mmetụta 16 MP (f / 1.8), ihe mmetụta 8 MP (f / 2.4) nwere oghere nwere oghere sara mbara, yana ihe mmetụta miri emi nke 2 MP (f / 2.4). A na-ahazi kamera ndị ahụ n'akụkụ aka ekpe ya na ihe mmetụta abụọ na-ekerịta otu ụlọ ahụ, ebe nke atọ na-anọkwa iche.
Enwekwara batrị 4,000 mAh nke na-akwụ ụgwọ site na ọdụ ụgbọ USB Type-C na nyocha mkpịsị aka a na-agbanye n'azụ. E kwuru na ọnụahịa ahụ erugharị ga-erughị $ 300 (~ € 270), nke dị ọnụ ala karịa ọnụahịa mkpọsa nke P Smart Z (€ 279 / ~ $ 313).
Enweghị ozi na ụbọchị ntọhapụ na nnweta, ma ọ ga-ewepụtara dị nnọọ anya dị ka e nwere ama ihe ịrịba ama na-echekwa na onye enwetatụbeghị aka ha na a unit.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei Y9 Prime 2019: ekwentị na-esote site na ụlọ ọrụ nwere igwefoto selfie na igwefoto azụ atọ
Nokia 4.2 ga-ebido n’izu a na India
Google kwadoro na njirimara Top Shot agaghị abịa na Pixel 2